Unonophelo, iimfuno kunye neempawu zeGramma loreto | Ngeentlanzi
El I-Gramma loreto Yintlanzi evela kwelona qela libalaseleyo kuba iyamangalisa kwaye iyaqaqamba. Igama laso eliqhelekileyo ngumakhulu wentlanzi kwaye lelona liqela leGrama. Ezi ntlanzi zikhethwa ngabalandeli beentlanzi ezincinci njengoko zihlala zihamba kancinci kwaye zifuna indawo encinci. Oku kubenza balungele abaqalayo kwihlabathi le-aquarium.
Ukuba ungumqali kukhathalelo lweentlanzi, kule posi ungafunda yonke into enxulumene ne I-Gramma loreto.
2 Iimpawu zeGrama Loreto
3 Iimfuneko ze-Gramma loreto kwii-aquariums
4 Ukutyisa umakhulu
Ezi ntlanzi zidume kakhulu ngokuchasa kwazo okukhulu kunye nokuziqhelanisa nokusingqongileyo. Ayizizo iintlanzi ezifanelekileyo ukuhlala nezinye iintlanzi kuba zinendawo enkulu kakhulu. Ukuba sifuna ukubazisa nezinye iintlanzi, kufanele ukuba babe ngabokugqibela ukungena etankini. Ngale ndlela ayizukuba yintsimi yabo kwaye ngekhe baziphathe gadalala.
Endalweni sinokuhlangana kuLwandle lweCaribbean kubunzulu phakathi kwe-1 kunye ne-40 yeemitha. Bahlala banxulunyaniswa neengqaqa zekorale emingxunyeni nakwiindawo ezinamatye. Kwezi ndawo kulapho baphawula khona intsimi yabo ukuze ezinye iintlobo zingangeni kuyo. Ukongeza, kuba banokushukumiseka okuncinci, bahlala rhoqo imini yonke kwezi ndawo. Banokuhamba ngokwamaqela axineneyo abantu ukuya kuthi ga kwi-100 yabantu.
Phakathi kwezinto zayo ezifumanekayo sifumanisa ukuba ziintlobo ezimeleyo zomnye wabalinganiswa kwiMovie yokufumana iNemo.
Iimpawu zeGrama Loreto
Umzimba wayo ungaphezulu okanye kancinci kwisilinda esiswini esisicaba. Isisu sakho sokubhukuda si-atrophiedKe ngoko, amandla abo okuqubha ayoyikeka. Zihlala zidada kufutshane neekorale kwaye zizimele kwimingxunya ematyeni. Ngesi sizathu abadingi santya sikhulu ukuze babaleke kumarhamncwa.
Banamaphiko aphakathi ngokomgangatho kwaye akhule kakuhle. Zibhityile kwaye zirhabaxa ukumila. Imisipha ekuphela kwayo ephuculwe ngakumbi yile yomqolo kunye nendawo yepectoral. Ukuba kukho imfuneko, sebenzisa ezi zihlunu ngokukhawuleza, kodwa ixesha elifutshane kakhulu. Kuthatha umzamo omkhulu kubo ukuze bakwazi ukudada kwikholamu yamanzi.
Umlomo wayo ubonakala umncinci, kodwa unokuvulwa ukuze ubambe iintlanzi ezinkulu. Inamazinyo amancinci angaphambili. I-livery yayo i-bichromatic, ibukisa kakhulu, kwaye inesiqingatha esimfusa kunye nesiqingatha esityheli. Eyona ndawo ingaphambili imfusa kwaye umphezulu wonke womzimba utyheli ngemibala exubeneyo. Iimpiko ze-ventral kunye nesiqingatha sokuqala se-dorsal fin zimfusa, ngelixa umsila kunye nelinye icala liphuzi. Ngokuchasene nenkolelo edumileyo, amaphiko eepectoral ayinambala.
Inomqolo obomvu ohamba ngakwiliso ngalinye kwaye ubaleke ngomhlathi ongaphezulu kunye neeoperculums. Abanayo i-dimorphism yesondo. Ubungakanani obuqhelekileyo bu malunga ne-7 cm ubude kwaye ubude bayo bokuphila bufikelela kwiminyaka emi-6.
Iimfuneko I-Gramma loreto kwii-aquariums
Ukuba sifuna ukugcina ezi ntlanzi ekuthinjweni, kufuneka sazi ukuba kufuneka kufezekiswe iimfuno ezithile. Azikhethi kakhulu malunga nobungakanani be-aquarium. Ngenxa yokuhamba kwabo okuphantsi, abayidingi i-aquarium enkulu kakhulu, ke zilungele ii-aquariums zokuqala. I-aquarium kufuneka ihonjiswe ngamatye aqhekekileyo apho ingazimela khona. Umthamo we-aquarium ukwanele ukuba ubambe iilitha ezingama-50 kwisampulu nganye. Ukuba unendawo ezininzi zokufihla, unokuhlala kwilitha enye.
Ukuba sifuna ukuba neqabane elivanayo, itanki leelitha ezili-150 lelona lifanelekileyo. Ngethuba nje kugcinwa imingxunya emininzi kunye neentsika ezi ntlanzi ziya kuba zikwimeko entle. Ukuba kukho ezinye iintlobo, i I-Gramma loreto iyakumba umngxunya omncinci kwindawo esezantsi ukuphawula indawo.
Ngokubhekisele kumanzi, afuna ukuba axhokonxwe kwaye afakwe umoya. Ke ngoko, kufuneka Icebo lokucoca ulwelo olulungileyo ukunqanda ukuqokelelana kweemveliso eziyityhefu. Isanti kufuneka ilunge kwaye ingabinamiphetho ebukhali. Ngale ndlela siya kukuphepha ukonakalisa isilwanyana. Ukuxinana kufuneka kugcinwe phakathi kwe-1020 kunye ne-1025 kunye nobushushu phakathi kwe-24 kunye ne-28 degrees. Siyakhumbula ukuba indawo yokuhlala yendalo yiCaribbean. Apho amanzi afudumele, ke ngokuxhomekeke kwindawo yethu, kuyakufuneka Akukho mveliso ifunyenweyo
Kubalulekile ukuba ii-nitrites kunye ne-ammonia zingaze zibekho, kuba azinyamezelwa, kwaye ii-nitrate azidluli kwi-10 ppm. Ngaphantsi kweemeko zolondolozo ezingonelanga (iiparameter eziphambukileyo, amazinga aphezulu e-nitrogen, ukwahluka ngesiquphe, ...) bathambekele ekufumaneni zonke iintlobo zezifo njenge-Oodinium, ebangela iintlekele zokwenyani kwiintlobo ezahlukeneyo zolu sapho lweentlanzi.
Ngokubanzi azibonisi ngxaki ekondleni kwabo ekuthinjweni. Kuyacetyiswa ukuba ubanike amaxhoba aphilayo kwiintsuku zabo zokuqala kangangoko banakho yi-Amphipocs kunye neeCopepods. Ezi ntlobo zifumaneka kakhulu kumatye aphilayo. Enkosi kubo, siya kuba nakho ukuphinda siyenze imeko-bume yendalo ngendlela ebalaseleyo.
Ngexesha lokuqala lokuhlala kwayo kwi-aquarium, ayihlali iyala phantse nakuphi na ukutya. Iyakwazi nokwamkela ukutya okubandayo. Ukuba unikwa kanye ngeveki ukutya imifuno kuyanceda ekucoceni amathumbu.
Ukuba kukho iintlanzi kwi-aquarium ezinkulu kakhulu okanye ezikhawulezayo inokuchaphazela kakubi ukutya kwakho. Kungenxa yokuba amandla abo okuqubha asezantsi. Kwakhona, ukuba kukho iintlanzi ezinobundlobongela kunye nomhlaba, banokwala ukutya ukuba baziva besoyikiswa.
Zizona ntlanzi zommandla ezinokuhlasela kakhulu naziphi na iintlanzi ezinobungakanani obufanayo nobazo okanye ezincinci. Ukuba bayasondela kwindawo azimele kuyo emiqolombeni, uya kubasongela ngogonyamelo ngaphandle kokumenzakalisa.
Ezi ntlanzi zinokuphinda zivelise ekuthinjweni, nangona zifuna ukuhlala zigcina iimeko ze-aquarium zizinzile. Kuyacetyiswa ukuba akukho nitrogen emanzini. Ukuvelisa kwakhona, esi sibini sigcwalisa umngxunya wazo ngazo zonke iintlobo zezixhobo. Into eqhelekileyo kukuba isebenzisa iziqwenga zaselwandle ukuba ziqale. Kulapho bafaka khona amaqanda emva kokuthandana kwabo okuhle.
Ngexesha lokufukama, banamandla ngakumbi kunangaphambili. Banokubulala amaqabane abo etanki leentlanzi. Ke ngoko, kungcono ukuba babekelwe bodwa. Abancinci basengozini yokungcoliseka kwamanzi.
Ukuba ungabaqalayo kwilizwe le-aquariums, ungathandabuzi ukuba I-Gramma loreto lolunye lolona khetho lufanelekileyo lokuqalisa.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » Intlanzi » I-Gramma loreto